विप्लव नियन्त्रण बाहिर गएकै हुन् ? के गर्दैछ सरकार ? - JaljalaKhabar Online Portal from Nepal
विप्लव नियन्त्रण बाहिर गएकै हुन् ? के गर्दैछ सरकार ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र नेत्र बिक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच तनाव बढ्दै जाने संकेत देखिएका छन्।
विप्लवका हिसांमिश्रित केहि राजनीतिक गतिविधीलाई ध्वंसात्मक र चक्कु देखाएर लुटने धन्दाको उपमा प्रधानमन्त्री ओलीको मुखबाट निस्किनुले उक्त पार्टीमाथि सरकार आक्रामक भएर लाग्ने स्षष्ट संकेत गरेको छ।
केहि दिन अघि ७२ अर्ब कर नतिरेको आरोप लगाई मुख्यालयसहित देशका विभिन्न भागमा रहेका एनसेल टावरमाथि एकैसाथ बम पड्काएर ‘कारबाही’ गरेको भन्दै विप्लव नेकपाले जिम्मेवारी लिएपछि सरकार उक्त पार्टीमाथि नियन्त्रणउन्मुख छ। नख्खु विष्फोटमा एक जना सर्वसाधारणको ज्यानसमेत गएको थियो ।
एनसेलमाथिकोे उक्त ‘कारबाही’पछि सरकार झस्किएको छ र देश भरिनै विप्लव कार्यकर्तामाथि धरपकड गर्न प्रहरी परिचालन भएको छ । विदेशी लागानिका आयोजनामा आक्रमण भएको यो मात्र पहिलो घटना भने होइन् ।
संखुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामाथि लगातार विष्फोट हुँदै आइरहेको छ। लगानी सम्मेलनपूर्व विदेशी लगानिका एनसेल लगायत अन्य संस्थामाथि आक्रमण हुनुलाई सरकारले विदेशी लगानिकर्तालाई निरुत्साहित पार्ने कदमका रुपमा लिएको छ।
विप्लवका गतिविधि शान्तिपूर्ण नभएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार आक्रामक देखिएको हो। सरकारले यही बाहानामा आफुहरुलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको विप्लव नेकपाको बुझाई छ। एनसेल विस्फोटपछि अहिले देशभरबाट विप्लवका नेताकार्यकर्ता गिरफ्तार हुने क्रम जारी छ। प्रहरीले ध्वंसात्मक गतिविधीमा संलग्न भएको आशंका र केहि कार्यकर्तालाई अत्याधुनिक हातहतियार सहित विभिन्न ठाँउबाट पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरी हिरासतमा अहिले देशभर ४ सय विप्लव कार्यकर्ता रहेको अनुमान छ। बिहीबारमात्रै कपिलवस्तुमा विप्लव कार्यकर्ताको घरमा प्रहरीले छापा मार्दा हतियार बरामद भएको छ। स्वयमं विप्लवको गाँउ रहेको उक्त क्षेत्रमा दुर्गा रोका नामका विप्लव नेकपाका कार्यकर्ताको घरमा छापा मार्दा एउटा पेस्तोल, दुईवटा एसएमजीको गोली र गोलीगट्ठा एवम् ‘जनमुक्ति सेना नेपाल, आधारभूत सैन्य तालिम, शिविर २ नम्बर कम्पनी’ लेखिएको ब्यानर भेटिएको दाबी प्रहरीको छ।
हतियार लुकाएको आशङ्कामा छापा मार्न गएको सुरक्षाकर्मीहरूको टोलीलाई स्कुले विद्यार्थीहरूले भने प्रतिकार गरेका थिए । प्रहरीले उक्त घटनालाई विप्लव नेकपाले स्कुले विद्यार्थीलाई परिचालन गरेको रुपमा लिएको छ।
नेकपाले भने अप्रेशनका क्रममा बिहान घरमा परिवारसँग बसिरहेका दुर्गा रोकालाई भीडन्तको नाममा गोली हानी घाइते बनाइ गिरफ्तार गरेको जनाएको छ ।
यसैगरी रोल्पामा पनि प्रहरीले विप्लव नेकपाका कार्यकताको घरघर पसी खानतलासी गर्ने, पिट्ने, धम्काउने गरिराखेको उक्त पार्टीले जनाएको छ । विप्लवको गाँउपछि नेकपाका अर्का नेता खड्ग बहादुर विश्वकर्माको गाउँमा खानतलासी गरेको छ।
यसरी सरकार ‘दमन’मा उत्रको भन्दै नेकपाले २०५२ सालमा तत्कालिन शेरबहादुर देउवाको सरकारले चलाएको रोमियो अप्रेशनको झल्को केपी सरकारले दिएको प्रतिक्रिया जनाएको छ । विप्लवले आफु नेतृत्वमा जनसकार र जनमुक्ति सेना बनिसकेको गत फागुन २ गते बताएका थिए ।
विप्लवको उक्त स्वीकारोक्तिपछि कार्यकर्ता हातहतियार सहित देशका विभिन्न ठाँउबाट प्रकाउ परिरहेका छन्।
उक्त पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तासँग हतियार पनि रहेको कुरा खुलस्त पारिसकेको रुपमा बुझ्न मिल्ने गरिसैन्य गतिविधिमा लागेको बुझ्न सकिने कतिपयका बुझाइ छ ।
के गर्दै छ विप्लव नेकपा?
देशव्यापी संगठन सुदृढिकरण तथा विस्तार अभियानमा लागेको विप्लव नेकपाका नेताहरु अहिले गाँउगाँउमा फौजी रुपमा परिचालित छ । उनीहरुले गाँउ गाँउमा जनुयुद्धकालकै झल्को दिनेगरि आफ्ना गतीविधी अगाडि बढाइरहेका छन् । नेकपाका एक केन्द्रिय नेताका अनुसार अभियान जनजीवीका राष्ट्रियता र जनाधार निर्माणका विषयमा केन्द्रीत छ।
अभियान अवधिमा पार्टीको आन्तरिक पंक्तीलाई सुदृढ गर्नका लागि संगठन निर्माण तथा विस्तार गरिने उनले बताए । उनले डिसिनेपालसँग भने, ‘राजनीतिकरुपले नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई जोड्न, संघर्षलाई नयाँ उचाईमा अभियान संचालन गरिएको हो ।’ अभियान सुरु हुनपुर्व नेकपाले ‘दलाल’हरुमाथि कारबाहि गरौं’ बारे पर्चा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैको परिणाम हालैका विष्फोटमा देखिएको नेकपाको बुझाई छ।
तर त्यसलाई सरकारी पक्षले कानुन हातमा लिएको रुपमा बुझेको छ । सरकारले उक्त पार्टीसँग वार्ता गर्न हालै वार्ता समति गठन गरेको थियो । तर त्यो औपचारिकताका लागि पनि नभएको विप्लवले अन्र्तवार्तामा भनिसकेका छन् ।
विप्लवको पार्टीका गैरकानुनी गतिविधि समयमै नियन्त्रण नगरे भविष्यका लागि खतरा हुनसक्ने भन्दै उक्त पार्टीमाथि दबाब बनाउने योजनामा सरकार लागेको नेकपाको बुझाई छ भने प्रहरी प्रशासनले गैर काुननी गनिविधी नियन्त्रणमा लागेको जनाएको छ ।
सरकारले विप्लव नेकपालाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाइसकेको छैन् ।
त्यसकारण सुरक्षा निकायलाई उक्त पार्टीप्रति गर्ने कारबाहिका बिषयमा अन्यौलता रहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लवप्रति संकेत गर्दै पटक पटक हिंसा सैह्य नहुने बताउँदै आएका छन् । गैरकानुनी काम नगर्न पनि उनले भन्दै आएका छन् । आफ्नो पार्टीमाथि ‘दमन’ भए प्रतिवाद गर्ने विप्लवले चेतावनी दिइसकेका छन् ।
विष्फोटक पदार्थ ओसार पोसार मुद्दामा पछिल्लो समय उदयपुर जिल्ला अदालतले प्रकाउ पूर्जी जारी गरेपछि नेकपाका महासचिव स्वयं विप्लव नै प्रहरीको ‘वान्टेट’ सूचीमा छन् । ‘दमन’ले प्रतिरोध जन्माउने भन्दै आएका विप्लव सरकारको कदमबाट पछि हटने मुडमा त छैनन् नै सरकारलाई चेतावनी समेत दिइरहेका छन् । भूमिगत अवस्थामा रहेका विप्लवले भित्रभित्रै तयारी गरिरहेका छन् ।
सरकार राज्य बिरुद्धको विप्लव कृयाकलापमा संलग्न हरूलाई समयमै नियन्त्रण गर्न चाहन्छ। सुरक्षा खतरा शान्ति सुरक्षाका लागि सरकारले अहिले विप्लवबाट मात्र खतरा देखिराखेको छ ।
त्यसलै उतmपार्टी प्रति सरकार कडा रुपमा लाग्ने देखिन्छ । हालै चितवनमा भएको एक कार्यक्रममा पूर्व माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विप्लव राजनीतिक रुपमा सहमतिमा नआए प्रशासन लगाएर ठिक पार्ने चेतावनी दिएका थिए । भूमिगत रहेका नेकपाका महासचिव विप्लव देशभित्रै विभिन्न स्थानमा पुगेर क्रान्तिका लागि जुट्न प्रशिक्षणसमेत दिइरहेको नेकपा स्रोत बताउँछ ।
वि स २०५२ सालमा माओबादिले युद्ध थाल्नु अघि सुरु गरेका गा्रमिण सचेतीकरण अभियान झै बिप्लबले आफ्ना नेता कार्यकर्ता लाई प्रशिक्षण, बिभिन्न ठाउँमा भूमिगत शैलीमा कार्यक्रम गर्दै आएको छ । प्रचण्ड शैलीकै भूमिगत गतिबिधिहरु सञ्चालन हुदै आएका छन् । प्रचण्ड भन्दा फरक कार्यशैली ‘एकिकृत जनक्रान्तीको कार्यदिशा’ मार्फत गाँउ र सहर केन्द्रीत क्रान्ती गर्ने तरखरमा रहेका विप्लव पार्टीले युद्धको तयारि सम्म गरिराखेको भन्ने सम्मका ब्याख्या अपब्याख्या पहिले देखिनै आउँने गरेका थिए । नेकपाका सल्लाहकार समिति अध्यक्ष ईश्वरी दाहाल ‘असारे काका’ ले सरकारको काम कारबाहीले देश युद्धको बाटोमा गइरहेको बताए ।
पछिल्लो समय बिभिन्न सघंसस्थामाथि धावा, भ्रष्टाचार, अनियमितता गर्नेहरुमाथि कारबाही भ्रष्ट कर्मचारीहरुमाथि कालोमोसो दल्ने लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जनमर्थन जगाँउदै गरेको अवस्थामा उतmपार्टीमाथि धरपकड सुरु भएको केहि राजनीतिक विश्लेषक बताउछन् । माओबादिलाई शान्ति सम्झौतामा ल्याउन भुमिका खेलका, बिस्तृत शान्ति सम्झौताका एक जना समन्वयकर्ता एकराज भण्डारी पछिल्ला घटनाक्रमले देशको हित नहुने बताए ।
विप्लवले अगांलेको हिसांको बाटो ठिक नभएको भन्ने आवाजहरु पनि व्यापक छन् । हिसांले देशलाई बबार्दी तर्फमात्रै लाने सामाजिक अभियन्ता कृष्ण पहाडी बताउँछन् । देशले अब हिसां थेग्न नसक्ने पहाडीको बुझाई छ । राजनीतिक आवरणका गैरकानुनी क्रियाकलाप निन्दनीय हुने पहाडी बताउछन् ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि ‘दबाब’ बनाउने सरकारको नीति र त्यसको ‘भण्डाफोर’ गर्ने विप्लवको रणनीतिले आगामी दिनमा तनाव वा हिंसाका घटना बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । सरकारले हिसांत्मक क्रियाकलाप नगर भनेर विप्लव पार्टीलाई भनिरहदा उक्तपार्टी को राजनीतिक दृष्टीकोण बनाएको देखिदैन। कतिपय विज्ञका शब्दमा जनयुद्ध २ को श्रृङखला प्रारम्भ भइसकेको छ, यो श्रृङखला कसरी अगाडि बढ्छ आगमी घटनाक्रमलेनै देखाउने छ । Dc Nepal बाट साभार